Tsy niandry ela ity mpanazatra frantsay nokamarain’i Madagasikara ity fa 48 ora taorian’ny nanambaran’ny filohan’ny federasiona malagasin’ny baolina kitra ny fanesorana azy tany Morondava, ny sabotsy teo, dia nanao fanitsiana avy hatrany. Isan’ny navoitrany tamin’ity fanalana baraka ny fanjakana malagasy ity ny « tsy nandraisany karama taorian’ny volana septambra intsony ».
Raha ny tsilian-tsofina aza dia « efa saika naka mpisolovaa mihitsy izy tamin’ny fihaonany sy ny iraka nalefan’ny minisitera tany an-toerana hanao ny fandaminana ny fialany ».
I Solo Rajaonarivelo, izay mpanolontsaina teknikan’ny minisitra, Virapin Ramamonjisoa, no nifandahatra taminy tamin’izany, araka ny fantatra. Fony mbola naha teto an-toerana an’i Jean Paul Rabier, ka efa nananontanona ny mety ho fandroahana azy dia nisafidy ny hangina izy. Ny hany nambarany dia ny hoe « misy ny tsy fifanarahana eo anivon’ny minisitera sy ny federasiona ». Niezaka ny nanitsy izany anefa ireo rafitra roa voakasika ireo fa « mitovy tanteraka ny tadin-dokanga ». Heverina fa tsy hisy intsony ny tohin’ity raharaha ity satria efa nanaiky ny hanao sonia an’io fifanarahana io i Rabier.